CES 2019 na-aga n'ihu na HyperX ọtụtụ ngwaahịa ya | Akụkọ akụrụngwa
CES 2019 na-aga n'ihu ma HyperX na-enye ọtụtụ ngwaahịa ya kacha mma
Igwe eji egwu egwu, ihe eji egwu ikuku HyperX Cloud Mix Bluetooth, ma obu mmekorita ya na Audeze TM na Waves Teknụzụ iji nye ahụmịhe ọdịyo dị omimi, bụ ụfọdụ n'ime ihe ọhụụ a na-enyefe n'ihu ọha na mmemme teknụzụ a CES 2019 na-ewere ọnọdụ ugbu a na Las Vegas.
Maka ndị na-amaghị ụlọ ọrụ HyperX anyị nwere ike ịsị na ọ bụ nkewa egwuregwu Kingston Technology Company, nke bu otu n’ime ndị isi na-emepụta onwe ha nke ncheta maka ngwaọrụ anyị n'etiti ngwa ndị ọzọ. HyperX na-etolite ma mepụta ngwaahịa maka ndị na-egwu egwuregwu ihe karịrị afọ 15: ncheta ọsọ ọsọ, draịva siri ike, ekweisi, keyboards, ụmụ oke, ngwaọrụ USB, na pad òké.
Na nke a nwere nke Paul Leaman, osote onye isi ala, HyperX EMEA, kọwara ndị mgbasa ozi nọ na ihe omume ahụ na ha nwere nnukwu mpako ịbụ otu afọ na-eweta ngwaahịa ha na nnukwu mmemme a, ọ sịkwara:
Enweghị ebe dị mma karịa CES iji kwadoghachi nkwa HyperX iji wepụta ngwaahịa dị elu maka egwuregwu na ụdị egwuregwu niile. Ma ị na-emikpu onwe gị n'egwuregwu royale, na-egwu egwuregwu basketball n'ịntanetị megide ndị enyi gị, ma ọ bụ ịnọdụ ala n'ihe ndina gị na-enwe egwuregwu ọgụ na Nintendo Switch, PlayStation or Xbox, ngwaahịa ọhụrụ HyperX ga-enye ahụmịhe egwuregwu dị egwu.
Ọhụrụ HyperX Pulsefire wakporo RGB nwere nanị imewe maka ndị egwuregwu chọrọ bọtịnụ ọzọ iji kee igodo ma ọ bụ ime iwu dị iche iche. HyperX Pulsefire Raid nwere bọtịnụ nwere ike iri na otu na ihe mmetụta Pixart 3389 nke na-enye nkenke na ọsọ ọsọ na ntọala DPI nke na-akwado 16,000 DPI ma na-enye ndị egwuregwu ohere ijikwa ntọala na akara ngosi LED.
Ke adianade do, na òké na-agụnye Omron dị elu Omron na-agbanwe ogologo oge dị nde 20 clicks. Emere Pulsefire Raid maka nkenke, mmiri na nzaghachi, na-enweghị osooso. N'iji ngwanrọ HyperX NGenuity, ndị ọrụ nwere ike ekenye nnukwu ọrụ na igodo iri na otu ma debe ha na nnukwu ụlọ akwụkwọ. Yabụ nke a bụ ngwaahịa zuru oke maka ndị na-achọ mgbe niile ịga usoro dị elu na egwuregwu ha.
N'ihe banyere ụda, ụlọ ọrụ ugbu a nwere mmekọrịta na-atọ ụtọ ma dị ike na ụwa ọdịyo, n'ihi nkwekọrịta ahụ na Audeze, ha jisiri ike ịzụlite ekweisi mbụ ha na teknụzụ Planar Magnetic. Igweisi a na-agbakwunye ụda olu nke 360 ​​na-agbanwe agbanwe na nke ezi uche dị na ya nke edere ngagharị nke onye ọrụ ugboro 1.000 kwa nkeji. Cloud Orbit ohuru na Orbit S Ha gụnyere nhazi nke ụda na ntọala ọdịyo 3D, gụnyere nhazi ha maka nha onye ọrụ, nhazi nke gburugburu ụlọ. Anyị bụ ndị ekweisi pụrụ iche maka ndị na-egwu egwuregwu na-achọsi ike nke na-agbakwunye igwe okwu ha na-ewepu iwe na nzacha maka nkata na ngwa olu nke nwere ike ịkwụsị ngwa ngwa n'oge ọ bụla.
Ihe ngosi nke HyperX mere na Las Vegas anaghị anọgide na nke a, na nke a, ka anyị hụ nkọwapụta nke ọhụrụ HyperX Quadcast. Nke a bụ igwe okwu eji eme ihe iji gboo mkpa PC, ndị ọrụ PlayStation 4 na ndị Mac ma ọ bụ ndị na-achọ iyi. Quadcast na-egosipụta ugwu mgbochi na-eme ka ọ ghara ịma jijiji, nhazi njikwa ịnweta uru dị mfe, usoro pola anọ nwere ike ịhọrọ, yana arụmọrụ dị mfe iji kwụsị ọkụ iji gosi ọnọdụ nnyefe. Site n'igosi olu n'ụzọ doro anya, Quadcast jikọtara ndị na-egwu egwu na-egwu egwuregwu ha nye ndị na-ekiri gị ụzọ dị mfe ma dị irè.
Ndị a bụ isi nkọwa nke ekweisi ndị a:
Sample / Bit ọnụego
Igwe okwu condenser electret.
Atọ 14mm capacitors
Polar ihe nakawa etu esi
Steere, Omnidirectional, Cardioid, Bidirectional
Nzaghachi ugboro ugboro
Igwe okwu: 254g
Ugwu na mgbodo: 364g
Ọnụ na eriri USB: 710g
Igwe okwu nwere ike iwepụ
2 Nwepụta ngwaahịa HyperX ọhụrụ
Onye na-emegharị ihe ntanetị, 100 mm.
Pressureda olu dị larịị
3,5mm (4 osisi): 1,2m
USB Type C iji pịnye A: 3m
USB Type C iji pịnye C: 1.2m
Ropdị igwe okwu
HyperX Predator DDR4 RGB modul 16GB. HyperX Predator DDR4 RGB dị ugbu a na modulu 16GB, na ọsọ nke 3000MHz na 3200MHz. A pụkwara ịzụta ha dị ka modulu nke ọ bụla ma ọ bụ na ngwa nke 2 na 4 na 64GB. Predator DDR4 RGB na-arụkọ ọrụ RGB ọkụ na teknụzụ HyperX Infrared Sync, na-ekwe ka ọtụtụ modulu mekọrịta ọkụ ọkụ ma mepụta ngosipụta agba pụrụ iche.
Kwadoro ya na motherboard, teknụzụ a na-enye ahụmịhe ọhụụ nke nchekwa RGB maka egwuregwu, PC overclocking, na ndị na-ewu kọmputa nke ha. Ndị a bụ isi njirimara akụkọ HyperX eri ibe DDR4 RGB:
HyperX eri ibe DDR4 RGB
Na-alụbeghị di: 16 GB
0oC ka 70oC
HyperX Cloud Alfa Purple Edition: Cloud Alpha Purple Edition gosipụtara ụlọ abụọ HyperX teknụzụ iji nyefee ụda ziri ezi na ụda dị egwu. Site na ndị ọkwọ ụgbọala 50mm, ọnụ ụlọ abụọ na-akụ na iche iche bass site na etiti na ụda dị elu, na-eme ụda maka egwuregwu, egwu na ihe nkiri na-emikpu onwe ha. A haziri Cloud Cloud iji nye nkasi obi kachasị elu maka ọtụtụ awa nke egwuregwu ekele maka ụfụfụ nchekwa kachasị elu nke HyperX, ụfụfụ akpụkpọ anụ sịntetik na-agbanwe agbanwe na nke na-adịgide adịgide, nke na-adịkarị mfe, nke na-ebu ọkụ. Igwe okwu ekweisi na-arụkọ ọtụtụ ọnụ na-egosipụta eriri nwere ike iwepu yana njikwa ọdịyo nke ga-eme ka ndị egwuregwu nwee ike ịgbanwe olu ma mechie igwe okwu ozugbo na eriri.
Nwepụta ngwaahịa HyperX ọhụrụ
Ngwaahịa ọhụrụ ndị a ga-adị na ndị na-ere ahịa na ụlọ ahịa na ntanetị oge niile n’oge 2019 mana ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya ekwenyebeghị ụbọchị akọwapụtara maka mmalite ahịa, yabụ anyị ga-echere ụbọchị ole na ole iji hụ ma akọwapụta ụbọchị mmalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » CES 2019 na-aga n'ihu ma HyperX na-enye ọtụtụ ngwaahịa ya kacha mma
Koogeek: Ngwaahịa Ahụ Ike Gị Kasị Mma na Ọrịre na Amazon